Booqashada Farmaajo ee Uganda maxay salka ku heysaa? - BBC News Somali
Booqashada Farmaajo ee Uganda maxay salka ku heysaa?
Kaddib qaraxii ay dadka badan ku dhinteen ee 14-kii bishan gilgilay magaalada Muqdisho ayaa dowladda Soomaaliya waxa ay bilowday dadaalo ay ku baadigoobayso sidii ay taageero ugu heli laheyd dagaalka ay kula jirto Xarakada Al-Shabaab.
Iyadoo taa laga duulayana Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyo wafdi uu hogaaminayo ayey booqasho uga bilaabatay dalka Uganda, sidoo kalana waxa uu wafdigaasi booqan doonaa dalalka ay askarta ka joogaan Soomaaliya.
Haddaba safarka Madaxweyne Farmaajo muxuu ku soo kordhin karaa ammaanka sii liicaya ee Soomaaliya? Su'aashaas iyo kuwa kale ayaannu waydiinnay Cabdiraxman Sahal oo ah cilmi baare ka faalooda arrimaha ammaanka, waxa uu u warramay weriyaha BBC-da Cabdirisaaq Xaaji Catoosh.
Maqal Duqeyn lagu beegsaday saraaakiil ka tirsan Daacish oo maanta ka dhacday Puntland
Duqeyn lagu beegsaday saraaakiil ka tirsan Daacish oo maanta ka dhacday Puntland
Maqal Colaadda u dhaxeysay Soomaalida iyo Oromada oo Diridhaba markale ka soo cusboonaatay
Colaadda u dhaxeysay Soomaalida iyo Oromada oo Diridhaba markale ka soo cusboonaatay
Maqal Oday Soomaaliyeed oo ay booliska Deegaanka Soomaalida ku jirdileen magaalada Jigjiga
Oday Soomaaliyeed oo ay booliska Deegaanka Soomaalida ku jirdileen magaalada Jigjiga
Maqal Abwaan ammaanta gabdhaha u adeegsada waxyaabo ay ka mid yihiin magacyada gawaarida
Abwaan ammaanta gabdhaha u adeegsada waxyaabo ay ka mid yihiin magacyada gawaarida
Maqal Reer Saleebaan Bidde, qoys wada maansoyahano ah
Reer Saleebaan Bidde, qoys wada maansoyahano ah
Maqal "Dowladda Soomaaliya waxaa loo baahan yahay inay isweydiiso ma sidan baa lagu jirayaa?"
"Dowladda Soomaaliya waxaa loo baahan yahay inay isweydiiso ma sidan baa lagu jirayaa?"